SPYV004 - OMG Mini Car Audio Recorder - 135-200 ora firaketana feo tsy tapaka - Vahaolana OMG
SPYV004 - OMG Mini Car Audio Recorder - 135-200 Ora firaketana feo tsy tapaka
1) Manohana ny horonam-peo maharitra maharitra ora 135.
2) Feo Auto manentana ny fandefasana fanombohana fanombohana rehefa manomboka ny resaka an-telefaona ary manohy rehefa tapitra ny resaka.
3) Naorina-in 2000mAh Ny fiarovan-tenan'ny rivodoza ambony lithium dia manome ny fitaovana miasa ao anaty fiara manodidina ny tontolo midadasika.
4) Magnetsin'ny indostrialy manerantany izay mametraka fitaovana mifampikasoka eo ambanin'ny seza fiara mba hisorohana ny fanadiovana tsy tapaka
1) Tsy maintsy ampandoavana azy amin'ny alàlan'ny solosaina ihany.
2) Alohan'ny hamonoana ny tariby USB dia mila miala aminy avy eo amin'ilay rindrambaiko eo amin'ny farany ambany amin'ny PC ianao. Tsy afaka manala ny tariby USB mivantana. Raha tsy izany, rehefa ampifandraisinao amin'ny PC amin'ny manaraka ny fandraisam-peo dia tsy ho fantatry ny PC izany.
Fanoroana an-tsarimihetsik'i Spy, nafenin-tsofina ny feo miasa anatiny torimaso kely nitarika, tsy misy mari-pamantarana na marika, fa ny taratra mitarika fotsiny avy amin'ny maranitra.
Tetikasa maoderina matanjaka, mora ny mametraka na manafina, ao anaty seza fiara?
Pretty tsara feo, tsara kokoa noho ny vokatra mitovy amin'ny tsena amin'izao fotoana izao.
Long life battery life 135-200 ora.
Voice activated recording, na mandamina ny fandraisam-peo.
6230 Total Views 1 Views Today